Wasiirka amniga Kenya oo ka hadlay dhac ciidanka booliska ay k... | Universal Somali TV
Wasiirka amniga Kenya oo ka hadlay dhac ciidanka booliska ay ka geesteen xaafada Islii
Wasiirka Arimaha gudaha iyo amniga Kenya Fred Matiang’i ayaa difaacay eedo loo jeediyay ciidanka booliska oo ku aadan in ay ku xadgudbaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida.
Mr Matiang’i oo kulan kula qaatay Isniinta maanta ah madaxda muslimiinta hoolka shirarka ee masaajidka Jamia Mosque ee magaalada Nairobi ayaa tilmaamay in ciidanka booliska ay mas,uuliyad ahaan iyo aqlaaq ahaan ay wanaagsan Yihiin.
Wuxuu intaa ku daray in tiro yar oo ka mid ah askarta ay ku kacaan falal dhac iyo laaluush la xiriira, balse aysan wada aheyn dhamaan ciidanka Booliska.
Falalka dhaca ah iyo qaadashada lacagaha laaluushka ay qaataan booliska Kenya ayaa kordhay labadii sano ee la soo dhaafay waxaana loo aaneynayaa qamaarka habka Online ka oo ku soo batay gudaha ciidanka, oo mararka qaar ay ku waayaan Mushaarkooda.
Wasiirka amniga ayaa dhanka kale balan qaaday in dowlada Kenya ay la xisaabtami doonto shaqsiyaadka xumeynaya magaca booliska, ayna shaqada ka saari doonaan askari kasta oo xitaa lagu tuhmo falal danbiyeed ka dhan ah Dadweynaha.
Kulanka dhexmaray madaxda muslimiinta Kenya iyo wasiirka amniga Fred Matiangi ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor sadex askari oo ka tirsan ciidanka booliska magaalada Nairobi ay lacag lix kun oo doolar ah ay ka dhaceen suuq ganacsi oo ku yaal xaafada Islii oo soomaalida ku badan Tahay.
Kan-xigaAskar iyo shacab ku dhintay qarax xoo...
Kan-horeWasaarada Maaliyada oo balan qaaday i...
55,406,211 unique visits